NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE | Bogga 979 ee 34663 | 2020 NAB Show News: Live Streaming, Podcasting, Broadcast Engineering, TV & Teknolojiyadda Raadiyaha iyo Idaacada Post Production. NAB Show 2020.
Sheekooyinka gaarka ah
Marka ay ka fiicnaato waxa ku jira, abuurista hal-abuurka ka dambeeya, ee dhakhso u yimaadda, waxa ...
Dhamaan xirfadlayaasha warbaahinada dibada jooga, hadaad raadineyso fursad aad ku kiciso ...
Bandhigga 2020 NAB Show waa labo bilood oo kaliya. Hal abuurka ka socda dhammaan qaybaha warbaahinta gudaha ...
Bulshada war baahinta ayaa leh noocyo badan oo kala duwan, oo ka kala socda meelo ay ka mid yihiin ...
Reedyowga iyo Idaacadda TV-ga ayaa door weyn ka ciyaara warbaahinta / warshadaha madadaalada. Sida teknoloji ahaan ...
Wixii hal abuur ah ee raadinaya tikniyoolajiyada heer-caalami, markaa AC Lighting Inc. waxay leedahay taxadar ...
Farsamooyinka farsamada ee Artec waxay soo bandhigi doonaan XENTAURIX iyo Multieye Video Surveillance Tech at 2020 NAB Show
Bandhigga 2020 NAB Show ayaa ah goob loogu talo galay xirfadlayaasha warbaahinta / madadaalada dhammaan noocyada kala duwan ee qod ...
Munaasabad caalami ah oo sanadle ah sida 2020 NAB Show ayaa martigelisa aqoonyahanno badan oo ka dhex jira hoteelka ...
Maaddaama tiknoolojiyaddu sii koreyso, markaa sidaas oo kale ayaa loo adeegsadaa hirgelinta adeegsiga maalmeedkeena ...
AppDynamics wuxuu ilaaliyaa waxqabadka App ee Kobcinta Ganacsiga Ka Wanaagsan
Kala duwanaanshaha ayaa ah waxa ka dhiga 2020 NAB Show dhacdo gaar ah. Fikraddaani waa waxa aasaas ahaan ...
Sannadkan Bandhigga 2020 NAB Show ee Las Vegas, Asustor America Inc. seddexda goor ee la sii daayay ...
Apantac wuxuu Soo Bandhigi Doonaa Sawir-Bixiye Noocyo Badan leh: T # at the 2020 NAB Show
Iyada oo ah naqshadeeye hogaamiya iyo soosaara tayo sare leh, muuqaal qaali ah oo qiimaynta sawirka e ...
AIC Inc. Waxay Kusoo Bandhigaysaa Server Kaydinta Hogaanka ah ee Shirka 2020 NAB Show
Waxaa jira waxyaabo badan oo hal abuur ah oo hal abuur abuuri karo, iyo xaddi kooban ...
Ka Baro Abuurista Clip Ka Soo Qaadashada 'Status Digitial' ee 2020 NAB Show
Warshadaha baahinta ayaa sii kordhaya maadaama xubno badan oo hal abuur leh ay sii wadaan in ay gacan ka geystaan ​​fidinta waxa aan ...
Waxbadan ka baro Waxyaabaha Ka Fiican ee Grass Valley ee 2020 NAB Show
Mawduuc wanaagsan wuxuu muhiim u yahay isgaarsiinta astaan ​​kasta ama cod kasta. Dooxada Grass waxay ku takhasustay ...
JVC Ku Soo Bandhigidda Kaamirooyinka Hogaaminaya Wershadaha ee 2020 NAB Show
Cid kasta oo suuqa ugu jirta badeecad maqal iyo muuqaal ah oo tayo sare leh, markaa 2020 NAB Show waa ...
Tifatirayaasha Codadka Motion Picture waxay ku dhawaaqayaan Soo bandhigyaasha Aaladda 67aad ee MPSE Abaalmarinta Dahabka ah
Los Angeles – Bandhigayaasha abaalmarinta 67-aad ee MPSE Golden Reel Awards waxaa ku jiri doona rikoorka Abaalmarinta Grammy ...
Bandhig Faneedka 2020 ee NAB oo ah "Waxaan nahay Idaacadaha" Dabaaldegga
Sannadkan waxay u muuqataa inay tahay xilli xusuus mudan oo ku saabsan waxsoosaarka wax soo saarka, iyo iyadoo 2020 NAB Sho ...
Kooxda Sawirada Adeegga Soo Saaraha ee Sony Sawirrada Kooxahan Ayaa Soo Bandhigay Ciyaartooda "Jumanji: Heerka Ku Xiga"
Sawirro Columbia 'Jumanji: Heerka xiga, baandada laga soo qaaday sanadkii 2017, Jumanji: Ku soo dhawow J ...
Fikradda madadaalada waxay ku kasban kartaa qiimaha fikirka lama huraanka ah ee ku saabsan sida ay u siin karto mac ...
Baahiyey IT Engineer
Comments Off dhanka Broadcast IT Engineer
Interface oo leh kooxo wax soosaaraya iyo hawlgallo si ay u hirgeliyaan xalal farsamo si looga soo baxo wax soo saarka wax soo saarka. Qalabaynta heerka nidaamka nidaamka qalabka farsamada, oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn, kontoroolka sayniska, qolka koontaroolka, qalabka kombiyuutarka, qalabka dhegeysiga iyo nidaamka kombiyuutarada ee la xariira dayactirka Qalabka Master, qaybinta aasaasiga ah, qalabaynta qolka iyo qalabka qolka lagu xakameeyo Qalabka iyo nidaamyada qalabka rakibaadda iyo casriyeynta. 3-5 khibrad kudhisan jawiga telefishankaAxperience / aqoonta maaraynta Master iyo nidaamka otomaatiga Taageerida adeegga kombiyuutarka ee kombiyuutarka iyo dayactirka. Mac OSX, Linux, SQL, iyo mareegaha Microsoft. Isku-kalsoonaanta shabakadaha TCP / IP iyo teknooloojiyada kale ee kombuyuutarada.
Xarunta Tiknoolajiyadda Xarunta Technology-Systems
Comments Off on Injineer Tech-Systems injineernimada
Maaddaama ay tahay xarun buuxda oo adeega ah, waxaan ku haynaa dhismo tayo-soo-saarka tayada-dambe ee tiknoolajiyadda, laakiin waxaan sidoo kale nahay kuwo had iyo jeer ah oo aan ku habooneyn oo aan ilaalino qalabka wax soo saarka. Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Isku-xirka Maalin-maalmeedkeena Nidaamka Nidaamka Nidaamka ayaa dhibaato ka geysta wuxuuna xalliyaa wixii IT-da iyo fiidiyoowga ah, wuxuu taageeraa dhammaan shaqaalaha oo wuxuu kugula talinayaa in la gooyo, gundhigo, shaqo-socodka, iyo natiijooyinka. Musharaxa saxda ah waa mid lagu kalsoonaan karo, masuul ah, iyo xiriiriye wanaagsan oo awood u leh inuu "luuqadda" la hadlo injineeriyada IT-ga iyo ...
VP Broadcasting & Hawlgallada Farsamada
Comments Off on VP Broadcast & Howlgallada Farsamo
Xarunta Warbaahinta Universal City (UCBC) waa xarunta NBCUniversal ee hawlgallada telefishanka West Coast. Xaruntu waa xarun wax soo saar iyo warbaahin ah oo taageera NBC News, NBC iyo Telemundo oo leh telefishan, iyo qaybo wax soo saar oo ka shaqeeya Universal Lot. Hawlgalka 24 7, UCBC wuxuu siinayaa kaabayaal muhiim ah iyo taageero tiknoolaji ah oo loogu talagalay uruurinta wararka, soosaarka noolaha-hawada, gudbinta, iyo hawlaha kale ee lagama maarmaanka u ah hawlaha telefishanka ee shirkadda. Wax soo saarka tooska ah ee soo saarista badan ee Universal ayaa sii kordhaya Chelsea dhawaan, Hello Ross, iyo Access Hollywood. Madaxwayne kuxigeenka Hawlaha Warbaahinta ayaa kormeeraya howlaha maalinlaha ah ee warbaahinta ee UCBC iyo kuwa kale ...
Kaaliyaha Soo Saarista ee Freelance
Comments Off on Kaaliyaha Wax Soo Saarka Bilaashka
Waajibaadka: - Shaqooyinka guud ee wax soo saarka sida soo ururinta sawirada, rikoodhka qoryaha, soo saarida qoob-ka-dhegayaasha, fulinta codsiyada Dubka, iwm. - Waxay ilaalisaa faylasha dhaqaalaha - codaynta, soo gudbinta codsiyada si ay u ansixiyaan, diiwaangalinta qaansheegadka, Dhibaatooyinka la xariira AP - Taageer maalinta isku-duwidda maalinta iyo baahida baahida loo qabo Panning iyada oo loo marayo gelitaanka xogta iyo warbixinta. - Qalabka lagu abuurayo tilmaamidda taraafikada iyo PSA ee taraafikada iyo u diridda wada-hawlgalayaasha shebekadda emailka. - Waxay ilaalinaysaa Qorshaha FOX Sports Media iyo dukumintiyada qoondaynta bishii. - Waxay ka caawisaa taageeridda baahiyaha maalinlaha ah ee maalinlaha ah oo ay ka mid yihiin cusboonaysiinta diiwaanada faafinta by Year ...
Comments Off Kaaliyaha Horumarka
Kooxda NFL Media Group ayaa raadinaysa kaaliyaha wax soo saarka si ay ugu biiraan kooxda diyaargarowga iyada oo qayb ka ah howlaha macaamiishu ay sii kordheyso ee maareynta qaybaha warbaahinta ee Culver City. Musharaxa guuleysta wuxuu keenayaa isku-dhaf ah aqoonta kubadda cagta, niyadjabinta sahaydinta, iyo rajo wanaagsan si uu uga barto xubnaha kooxdeyda ee rikoodhka. Diiwaangelinta horey u soo aruurisay, laakiin aan loo baahnayn. Waajibaadka: - Ka caawinta isku-duwidda fogaanta iyo martida martida ee barnaamijyo kala duwan oo NFL ah oo ay ku jiraan barnaamijka NFL-ka ee NFLAM, barnaamijkiisa iyo barnaamijka macluumaadka NFL Total Access, barnaamijkiisa wacyigelinta ee kuxiran Horyaalka, iyo NFL. mar walbaa soo koraya ...
Waajibaadka waxaa ku jiri doona laakiin aan ku xaddidneyn: Xafiiska Guud ee maamulka iyo taageerada wax soo saarka, iyada oo ku xidhan hannaanka xirfadlaha ah ee Datka, diiwaangelinta iyo dayactirka xogta. Sameeynta iyo raadinta xafiisyada DCP iyo KDM ee tiyaatarada iyo raadinta FedEx, UPS iyo adeegyo kale oo kumbuyuutar ah Wacyigelinta iyo dareenka maareynta macluumaadka qarsoodiga ah ee adeegga macmiilka la socdo oo lala socdo macaamiisha si loo hubiyo soo gudbinta iyo ciyaarista qalabka la bixiyayBarqabka iyo xirmooyinka daaweynta DCP iyo filimka gadaal u diraya mashaariicda masraxa ee IMAX sida loo baahan yahayArajin la socota DCP, xaqiijinta iyo shirkadda QCDrive van kor u qaadka iyo / ama keen waxyaabaha, sida loo dalbaday Xirfadaha Cilmiga QAABILKA IYO ...
Comments Off Intern, Production News
Kooxda Disney ABC Television Group (DATG) waxay hoy u tahay dhammaan Walt Disney Company ee madadaalada adduunka iyo guryaha tv-ga. Kooxda waxaa ka mid ah Shabakadda ABC Television Network (oo ay ku jiraan ABC Daytime, Kooxda AB Entertainment Entertainment iyo qaybta wararka ABC); barnaamijyada "Disney Channels Worldwide Worldwide" ee ganacsiga tv-ga, ABC Family and SOAPnet; iyo sidoo kale qaybinta qeybinta telefishanka Disney ABC Telefishinka gudaha iyo Disney ABC ESPN Television. Kooxda Disney ABC Television waxay sidoo kale maamushaa Raadiyaha Telefishinka, dareenka guud iyo kuwa aan khayaaliga ahayn ee daabacaadda Hyperion, iyo sidoo kale xiisaha shirkadda ee shirkadaha A & E Television. Wixii soo koobaya ee ganacsiga kala duwan ...
Maamulaha iyo Maareynta Waxyaabaha
Comments Off on Naqshadeeye iyo Maareeyaha Wax Soo Saarka
Matxafka Cusub wuxuu doonayaa Maareeyaha Naqshadeynta iyo Wax soosaarka si uu uqorto dusha sare ee Matxafka Cusub (online iyo daabac) dhammaan waaxyada. Maareeyaha Designer iyo Wax-soo-saarka ayaa door muhiim ah ka ciyaari doona bandhigida astaanta iyo sii wadida dhismaha nidaamyada qaab-dhismeedka guryaha si loo helo xalal wax-ku-ool ah oo xeeldheer oo ay u eegaan habka wax-soo-saarka Mashruuca Cusub ee Maktabadda. Warbixinta mawqifka ee Agaasimaha Suuqgeynta iyo Agaasimaha Dibedda. MAS'UULIYADAHA - Naqshadeynta, soo gudbinta faylalka wax soo saarka ee kama dambaysta ah iyo maareynta daabacaadda Matxafka Cusub si loogu daro (oo aan ku xaddidnayn): qalabka xubinimada, bandhigga iyo ...
Codsadayaashu waa inay ahaadaan kuwo kama dambaysta ah, oo ay ku xiran yihiin, gacmo-kor u qaadid, koox kooxeed, ujeedo, iyo is-goosan. Musharaxa guusha leh waa inuu lahaado karti wax qabad badan, inuu si fiican u shaqeeyo cadaadiska, iyo inuu la shaqeeyo xirfadlaha ugu sarreeya shaqaalaha dhammaan shaqaalaha. Musharaxa waa inuu lahaadaa qaab gaadiid ah oo loo marayo iyo ka iman karo goobta dhacdada. Nadaafadda iyo muuqaalka shakhsiyeed waa in la isku keeno oo la soo bandhigi karaa. Xirfadaha isgaadhsiinta fiican waa waajib. Waayo-aragnimadii hore ee muusiga iyo goobaha lagu caweeyo, maareynta dhacdooyinka waxqabadka nool, iyo / ama suuq-geynta suuqa ayaa sidoo kale doorbidayaa.
KOVR waxay raadineysaa Kaaliye Soo saaris. Musharrixiinta booska waqtigaan ah waa inay lahaadaan karti heer sare ah oo waxqabadyo badan leh oo leh xirfadaha qorista wanaagsan. Waxaad ka shaqayn doontaa telefoonka-kor u qaadista, ka caawinta samaynta sawirrada, ka caawinta hawlaha miiska shaqada iyo hawlaha kale sida loo baahdo soo saarida wargeysyada.
Comments Off Isku-duwaha Wax-soosaarka
Mashaariic badan oo laga bilaabo bilawga ilaa dhammaadka Maaree amarrada soo galaya, isuduwidda shaqaalaha gudaha iyo kuwa dibedda ah Maaree jadwalka waxqabadka, fulinta iyo bixinta mashaariicda daabacaadda, digital iyo fiidiyowga Helitaanka oo hubi sheyga iyo hubi in mashaariicda si sax ah u bixiyaan mashaariicda Usher iyada oo loo marayo oggolaanshaha iyo Sharciga sharciga ah in la helo calaamadaha ugu dambeeya ee daabacaadda, dijitaalka & fiidiyowga, sida fulinta dambi, caddaynta midabaynta, farsamooyinka, meeldhexaadka, iwm. oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn Brand Creative, Client, BA, Legal & S & P Taageerida kooxda oo dhan Brand Creative inta lagu jiro Habka horumarinta hal-abuurka Qaado qoraallo ku saabsan wada-xaajoodka hal-abuurka / shirarka iyaga oo u diraya tixraaca iyo fulinta Gargaarka
GUDDIGA SHAQADA: Waxay mas'uul ka tahay bixinta taageero injineernimo ururka. WAXYAABAHA WAX-KA-QAADANAYO IYO MAS'UULIYADAHA: Waxay ka caawisaa soo saarista wargeysyo iyo istuudiyo kale / wax soosaarka fog ee loo qoondeeyay sida loo qoondeeyey. Samee farsamoyaqaan kasta oo wax soo saarka warfaafinta, oo ay ka mid yihiin rakibidda iyo jilidda jilayaasha, boogaha la shaqeeyo iyo / ama wargeyska, warshadaha / iyo hawlgalinta codka maqalka ah. Waajibaadka kale ee loo xilsaaray Maamulaha Warshadaha / Maamulaha Warshadaha ama Maareeyaha Waraaqaha. Meelaha kale ee loo qoondeeyey. Qodobbada loo qoondeeyey: Si loo guto shaqadan si guul leh, shakhsi ahaan waa inuu awoodaa inuu guto waajibaadkiisa muhiimka ah ee ku qanacsan. Shuruudaha hoos ku taxan waxaa ka mid ah waxbarashada, aqoonta, xirfada, iyo / ama awooda loo baahan yahay. Suurtagalnimada macquul ah ...
Farshaxan wax soo saar
Comments Off dhanka farshaxanka Production
Weriyeyaasha majallada caafimaadka iyo buugaagta caafimaadka macaamiisha waxay raadinayaan qibrad dhiirigelin leh, farsamooyin leh oo jilicsan oo wax soo saar leh oo leh 5 sano oo khibrad ah. Feejignaanta faahfaahinta, xallinta dhibaatooyinka, iyo xirfadaha isgaarsiinta waa muhiim. Artist Artist wuxuu abuuri doonaa, horudhac, dib-u-eegid, dib u habayn iyo dib-u-eegis faylasha ee InDesign, QuarkXPress, iyo Acrobat, ka dibna qaabeynaya faylasha lagu sii daayo si loo daabaco iibiyeyaasha. Aqoonta udiyaar gareynta, bakhtiinta iyo daabacaadda daabacaadda, iyo waayo-aragnimo sawir leh oo daabacan iyo shabakad ayaa loo baahan yahay. Waa inaad leedahay aqoon xoogan oo ku saabsan habka faylka iyo hababka ugu fiican ee wax soo saarka daabacaadda. Waayo-aragnimada laymanka hore ayaa loo baahan yahay. Fadlan ogow in tani ay tahay ...
Isku-duwaha Wax-soosaarka, Lincoln Media Media
Comments Off Isuduwaha Wax soosaarka, Lincoln Center Media
Warbaahinta iyo Digital Digital ee Xarunta Lincoln waxay ka shaqeysaa inay soo bandhigto waxqabadka heerka fasalka iyo farsamada farshaxanka ah ee ka dhacaya goobahayaga si ay u fidiyaan dhagaystayaal ballaaran oo ku baahsan waddanka iyo adduunka iyada oo loo marayo qaybinta mashaariic kala duwan. Saxiixaaga, taxanaha telefishanka abaalmarin ah, Lincoln Centre Live, wuxuu soo bandhigaa qaab nololeedka riwaayadaha, muusikada, qoob ka ciyaarka iyo qoob ka ciyaarka oo ku saabsan qiyaastii 20 million telefishinnada dalka oo idil sannad kasta. Waxaan sii wadi doonnaa inaan kordhinno deeqdadayada mashaariic kala duwan, oo ay ku jiraan labo wareysi oo ku saleysan warshadaha websaydhka (Spotlight On- and Rapid Fire) iyo bandhigyo taxanahan ah (ugu dhawaa, ...
Isuduwaha Production Post
Comments Off on Isuduwaha Wax soosaarka Post
Rikoodhka, ururada, raadraaca, qaybinta, dib-u-soo-celinta iyo bixinta dhammaan Maaddooyinka la xiriira Wax soo-saarista. Tani waxaa ka mid ah in la ilaaliyo xogta macluumaadka iyo falanqeynta falanqeynta si ay ula socdaan dib u celinta iyo qalabka kale ee loogu talagalay studioska dibadda, la qabsiga / xayeysiinta / qaybinta qalabka loogu talagalay saxiixida iyo sidoo kale bixinta kama dambeyska ah, iyo si ay u caawiso Kormeerka Soo-saaraha Kadib si kasta oo lagama maarmaanka ah si loo sii wado hawlaha shaqada Habka Wax-soo-saarka. Inay si firfircoon u abaabulaan faahfaahin dheeraad ah iyo awoodda ay u leeyihiin in ay ku badan yihiin heerar kala duwan. Waxaa laga yaabaa in loo baahdo oo keliya in aysan ka shaqeynin bandhigyada badan laakiin dhowr maamulayaal, waxay u baahan yihiin awoodda inay isbeddelaan dariishyada ayna ka shaqeeyaan siyaabo kala duwan iyo ...
Abuuri jadwallo wax-soo-saarka leh daabacayaasha si ay uhesho taariikhda daabacaadda Diyaarso faylasha iyo farshaxanka u gudbinta kala-jiidayaasha midigta Hubi caddaymaha, blues, iyo F & Gs oo ay weheliso tifaftirayaasha Diiwaan gelinta amarrada iibsashada iyo tilmaamaha maraakiibta daabacayaasha Sharciga muhiimka ah ee isbeddelka qaabaynta ee daabacaadayaasha caalamiga ah Cusbooneysiin iyo sii wad Website-ka wuxuu ka kooban yahay barnaamijka "Microsoft Office Suite" (Word iyo Excel), Adobe Creative Suite (Photoshop iyo InDesign), iyo Quark Qalabaynta maareynta iyo mashruuca mashruuc ayaa looga baahan yahay Aqoonta maareynta maareynta ...
MEDIA AND MANAGER
Comments Off on MEDIA iyo MAAMULKA Production
Kaalmaynta dhammaan wejiyada qorshaynta warbaahinta oo ay ku jiraan abuurista RFP iyo qaybinta, ururinta xogta, miisaaniyadda iyo fulinta qorshooyinka suuqgeynta. Ka caawinta dhammaan wejiyada wax soo saarka oo ay ka mid yihiin raadinta xayeysiinta iyo sawirada sawirada sawirada, maaraynta riixista shaybaarka, iwm. Aqoonta shaqo ee dhammaan dhinacyada wax soo saarka iyo warbaahinta ee daabacaadda, webka iyo interaktifka ayaa la door bidaa sidoo kale rabitaan ah in lala shaqeeyo dhammaan dhexdhexaadinta. Wax ka qabashada iibiyeyaasha iyo falanqaynta dalabyada tartanka. Xidhiidh toos ah oo lala yeesho macaamiisha iyo u diyaargarowga / fulinta bandhigyada kulanka. Joogtaynta nidaamyada gudaha iyo nidaamyada ururada. Inaad noqoto ciyaaryahan run ah oo raaxo leh iyo ...
Waajibaadyada: Waxaa loogu yeeri doonaa inay ka shaqeeyaan dhammaan qaybaha ka soo baxa xafiiska DC-ka taleefishinka illaa dijitalka bulshada. Wuxuu la shaqeyn doonaa miiska wargeysyada, bandhig kooxo, qolal lafdhabar u ah iyo qolalka kontoroolka. Waa inuu muujiyaa kartida tifaftirka ee cadaadiska. Waad ka masuul tahay caawinta wax soosaarayaasha dhamaantiis ee CNN ee leh: - Cilmi-baaris - Warbixinta - Qorista - Fiidiyowga Goobidda - Guryeynta iyo dhisida sawirada - Qaadista iyo farsameynta fiidiyowga - Abuuridda iyo soo dhajinta sheekooyinka xisaabaadka warbaahinta shabakadda iyo bulshada - Sheegidda iyo gundhigga qoraalada muhiimka ah ee fiidiyowga iyo warbaahinta bulshada - Editing video for web - Qorshaha daabacaadda iyo suuqgeynta ...
Page 979 of 984«First...950960970«977978979980981»...Last »